Qigong अभ्यास को शारीरिक र आध्यात्मिक लाभ
Qigong को लाभ
Taoist योग आधुनिक विज्ञान को भेटिन्छ
Qigong (जीवन बल खेती) को प्राचीन अभ्यास - ताओइस्ट योगको एक रूप - धेरै लाभहरू छन्। यी फायदेहरू प्रत्यक्ष रूपमा क्यूईगओग चिकित्सकहरूको धेरै शताब्दीहरू अनुभव गरेका छन्, र हालैमा, वैज्ञानिक अध्ययनको प्रथारोराद्वारा दस्तावेज गरिएको छ।
स्वास्थ्य = एक क्यूई को संतुलित प्रवाह
ताओवादको अनुसार, हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यले क्यूईको स्पष्ट, बलियो र सन्तुलित प्रवाहलाई मेरिडियन प्रणाली मार्फत निर्भर गर्दछ।
क्यूगोंग अभ्यासले यो मात्र हासिल गर्दछ, यो कुनै आश्चर्यको रूपमा आउन सक्दैन कि क्यान्सरको पनि फाइदा (चीले "ची कुङ्ग") अभ्यास गर्दछ हाम्रो शरीरको हरेक भौतिक तवरमा, साथसाथै हाम्रो दिमागको मानसिक, भावनात्मक र आध्यात्मिक पक्षहरू ।
Qigong अभ्यास को शारीरिक लाभ
Qigong अभ्यासले शरीर बलियो र अनुहार बनाउँछ। यसले ब्यालेन्स, स्टेमना र लचीलापनमा सुधार गर्दछ। हृदय हृदय, श्वसन, पाचन, endocrine, प्रतिरक्षा र केन्द्रीय तंत्रिका तंत्रहरूमा यसको सकारात्मक असर छ। यसले चिकनी छाला सिर्जना गर्दछ, र शरीर भित्र गहिरो गर्मीको सुन्दर भावना। यसले यौन जीवनशैली बढाउँछ, र हाम्रो निद्रा समय अझ बढी गहिरो र पुनरुत्थान हुन अनुमति दिन्छ। समयको साथ, qigong अभ्यासले पुरानो दुखाइ कम गर्न वा हटाउन सक्छ। यो पनि उम्र बढ्ने प्रक्रियालाई उल्टाउन शक्ति छ, र युवापन पुनर्स्थापना।
Qigong अभ्यास द्वारा बनाईएको क्यूईको चिकनी र संतुलित प्रवाह आफूलाई मनपर्ने, आनन्दित, आशावादी र मनपर्ने अवस्थाको रूपमा देखाउँछ।
जबकि क्रोध, डर, चिन्ता वा दु: खको भावनात्मक ऊर्जा अझै पनि उठ्न सक्दछ, तिनीहरू धेरै "चिपचिपा" हुनेछन् - र बनिन्छन् र त्यसपछि ठूलो क्षेत्रको आनन्द, आभारी, स्वीकृति र समानुपातिकताको बीचमा भंग गर्न सकिन्छ।
Qigong को मानसिक र आध्यात्मिक लाभ
Qigong अभ्यास द्वारा उत्पन्न स्पष्ट ऊर्जा र मानसिक स्थिरता को बहुतायत मानसिक मान्य स्पष्टता को समर्थन गर्दछ, र दुवै अन्तर्वार्ता र रचनात्मकता को पोषण गर्दछ।
जब हाम्रो खुफिया आन्तरिक शरीरसँग जोडिएको छ, यसले बढ्दो अचम्मका माझ फैलाउँछ र गहिराइ दिन्छ।
हामी हाम्रो कियिंगग अभ्यासमा गहिरो रूपमा, हाम्रो आध्यात्मिक च्यानलहरू - जस्तै तेस्रो-आँखा - धीरे-धीरे खुला। हामी विगतको धेरै सूक्ष्म तथ्यहरूको बारेमा जान्दछौं, र अनुभव शुरु गर्न, सीधा, हाम्रो-ए-ए-एसँगको अन्तर्वार्ता।
लाभहरू कटौती गर्न, तपाईंले अभ्यास गर्नुपर्छ
Qigong अभ्यास को यी धेरै फाइदाहरू कटौती गर्न सुरु गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो, निस्सन्देह, अभ्यास गर्न सुरु! तपाईं मध्ये कुन उपलब्ध उपलब्ध फारमहरू छनौट गर्नाले तपाईंको व्यक्तिगत परिस्थितिमा निर्भर रहनेछ: तपाईंको व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू, तपाईंको भौतिक अवस्थाको लागि उत्तम के हो, र तपाइँ जहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ शिक्षकहरू र / वा कक्षाहरूको उपलब्धता।
Qigong अभ्यासको लागि पोषण समर्थन
* कोलोस्ट्रम: प्रकृतिको सही खाना - रोगहरू र चोटहरूबाट रिकभरी समर्थन गर्दछ; एथलेटिक प्रदर्शन बढ्छ; र असाधारण स्तर शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्य र भलाई को पोषण गर्दछ।
* ताओस्ट प्रैक्टिस र आहार - खाद्य पदार्थहरूमा एलिजाबेथको सिफारिसहरू तपाईंको आहारमा समावेश गर्नदेखि खाना खान र खाना खाने।
एक्यूप्रेचर खजाने: हुई यिन - रेन 1
चीनमा बौद्ध धर्मको इतिहास: पहिलो हजारौं वर्ष
अस्तित्व भनेको हो? अस्तित्व छैन?
2-मैन घोडा गोल्फ टूर्नामेंट कसरी खेल्ने
3 टाइम्स मौसम को नजिकै धेरै बहाल या रद्द गरे सुपर बाउल
तपाईंको खुट्टाबाट सागर अचिन स्पिनहरू कसरी हटाउनुहुन्छ?
आत्मकथा मूड (क्रियाहरू)
पाठ योजना लेखन - उद्देश्य र लक्ष्यहरू
सबन को बारे मा
समग्र सामाग्री को परिभाषा के छ?
प्राग्राकृतिक शार्क चित्रहरु र प्रोफाइलहरु
हिंगिल्ड के हो?
गोल्फ डेमो दिनहरू: के तिनीहरू हुन् र तिनीहरूलाई कसरी पत्ता लगाउँछन्
यौनवाद के हो? एक प्रमुख स्त्रीवादी शब्द परिभाषित
मोहनदेव गांधीको जीवन र प्रतिबद्धता
परिभाषा र अस्पष्टताका उदाहरणहरू
क्लटर काटन मा अभ्यास
ल्याटिन अमेरिकामा स्वतन्त्रता दिवसहरू
रसायन रसायन समस्याहरु: आदर्श ग्यास कानून
संगीतको तत्व परिचय
लाम्बर्ड्स: उत्तरी इटालीमा एक जर्मन ट्राइबी
आन्द्रागोल के हो र कसलाई थाह छ?